Ghana Ayekoo - HOT STORIES GHANA
Bismark Attobrah 1 year ago 5 min read
Ɛbere bi ɛkɔbaa sɛ Nana Nyankopɔn de sika-kɔkɔɔ kukuo kɔsii kwaebrɛtuo bi mu maa mmoadoma nyinaa. Na Ɔsorosoro Hene no ankasa kaa sɛ ɔbɛhia ɔhoɔdenfoɔ a ɔwɔ mmoadoma no mu wɔ kwaeɛm’ hɔ na ɔde sika puduo yi ahyɛ nensa.
Ɔbɔadeɛ no ano annsi mpo, na gyata sɔre bobɔɔm’ kaa sɛ: wo Nana Nyame, wo na wobɔɔ adeɛ nyinaa, sane bɔɔ yɛn mmoadoma nso. Wo na wonim ahoɔden a wode adua me mu. Na sɛ ɛkaa ɔhoɔdenfoɔ nkoaa na wohia de w’agyapadeɛ ahyɛ ne nsa deɛ a, ɛnneɛ, na woda-so hwehwɛ obi foforɔ? Sɛ ananse wɔ fie a, yɛbisa deɛ ɔtoo ntontan?
Gyata amfa ne mmobɔmu no apem mpo na sisire-kwabrafo sɔre gyinaa ne nan nnan so sei: birim!
Ɔde setwerɛ ne nkekamu yii gyata ano sɛ: hwan nso ne wei deɛ? Sisire akyi ɔhoɔdenfoɔ bio ne hwan? Se-bɔfoɔ a se-bɔfoɔ, mmɔwrɛ a mmɔwrɛ, deɛ ɔnnsuro mmogya no ne me sisire-kwabrafo ntentam wɔ sika kukuo yi ho.
Me rekasa yi na mmoadoma yi mu akyɛ mienu sei – tu!
Abusua baako a, ɛfa gyina gyata akyi, ɛna ɛfa nso taa sisire akyi.
Asoroboa mma du a, nnum wɔ gyata afa, saa ara nso na nnum a aka no nso wɔ sisire afa.
Ɛnyɛ ade-foforɔ nsɔ wɔ wansane mma mu, adowa mma mu, kootoo mma mu, kɔkɔte mma mu, ɛna ɔtwee – agyanka nso ne ne mma mu saa ara.
Na ani ayɛ – nyan. Gyata ate agyina, ahemham ayiyi ne mmɔwerɛ apiepie a, nese bɔfoɔ yi ayiyi sɛ nsankra – agyan anaa Filistini Goliati peaa.
Na wohwɛ mfifire a ɛrebram sisire nso a na ɛrekame ayɛ sɛ ɔno deɛ mpo w’aboa ne-ho asene gyata mpo.
Oo, sɛ Nana Nyankopɔn bɛyɛ ntɔkwa ni agorɔ ni, ahyɛn n’abɛn sɛ wɔmfa akansie no nhyehyɛ soɔ no, na ahodenfoɔ mienu ti si anim’ dadaada – kimm!
Ɛbaa saa no, wɔte gyinaaeɛ, hyɛɛ aseɛ totooeɛ.
Nɔkwasɛm ne sɛ: wɔn nyinaa yɛ benkuma, enti wɔn ntɔkwa no ayɛ benkufoɔ ntɔkwa. Wei nim sɛdeɛ ɔtumi to twɛde – wuo, ɛna oyi nso nim sɛdeɛ wɔma ne yɔnko to ampaho.
Wɔko-ko-ko-ko, na obiara ntumi mmfa ne yɔnko atikɔ nnka fam.
Na ɛkɔbaa sɛ gyata piaa sisire, anka ne-to rekɔpem fam, ɔyɛɛ sɛ anka ɔde neho retwere dua-ahoma bi, oo, na ɔkwakuo ba baako de huu asane abɛtwe ahoma yi afiri hɔ.
Annte ɔkwakuo a ɔtɔ so mmienu a ɔtaa sisire akyi no dɛ. Ɔno nso bɔɔ no yrɛdɛdɛ sane kɔɔ Agya Bɔfoɔ akuraa kɔtuu gyetia. Ɔbɔɔ hŭŭ kaa ntam sɛ ɔbɛtwa ɛgya ato kwaeɛ no mu ahye no dwerɛbɛɛ.
Nkwaakuo nkaeɛ no nso a wɔdi gyata akyi no nso kaa sɛ: na hwan na ɔnnim deɛ ɛgya wɔ wɔ Agya Aɔfoɔ akuraa ase hɔ? Anni sima bi, na wɔn nso akɔtutu ngyetia a, kwaeɛ no ase nyinaa ayɛ kɔɔ-kɔɔ.
Nana Nyame a ɛnnyɛ ne tirimpɔ ne sɛ mmoadoma yi nko, nkum wɔnho, na mmom ɔrehwehwɛ ɔdɔ ne abadaayɛ a ɛwɔ n’abɔdeɛ tirim no, hwɛɛ deɛ adikanfoɔ a wɔrepere tumi no bɛyɛ.
Ɔnkɔhwɛ a, na gyata ate agyina ama ne nsa so sɛ: makyi difoɔ, mo mfa mo ngyetia no nnu nsuo mo. Kwaeɛ wei na agye yɛn nyinaa. Sɛ ɛnnɛ, yɛde ɛgya to mu a, yɛn ankasa na yayɛ yɛnho dɔm.
Gyata asɛm yi tɔɔ asukɔtwea nsuo guu sisire-kwabrafo akoma so, ɛdwodwoo nabufuo ano. Na ɔno nso kaa sɛ: ɛtuo nkɔtwere deɛ ɛtwere. Ɛwɔm sɛ funtufunafu ne dɛnkyɛfunafu afu yɛ baako nso wɔredidi a na wɔ repre ɛnam tɛkyerɛma so dɛ nti, ɛnso sɛ wɔdi aduambɔne gu wɔn afu baako no mu a, ɛbɛbɔ nwom ma ɔmo asa wɔ dasuo mu a akra nyinaa adeda.
Ɛnɛ na gyata adi kan ama ne nsa so sɛ ɔbɛdi yɛnso panin, me sisire mapene so ama no.
Na mmom wɔ Nana Nyankopɔn anim na me reka saa asɛm yi, sɛ gyata ahunu sɛ mewɔ dɔm, ɛwɔ akyitaafoɔ sɛ ɔno ara, enti, ɔmfa wɔn nyinaa sɛ ne mma, ɛne ɔno nso nakyi – taafoɔ, na sɛ ɔde Nana Nyame sika no siesie neho a, ebi nso aso me ne me nkurofoɔ nso so.
Ɛwɔm sɛ obi de nipa anim fɛreɛ bɛmene ntasuo deɛ, nanso ɔnnyɛ saa ara abrɛ a ɛyɛ awuduro na ɛhyɛ nanum’.
Gyata too nensa kyeaa sisire, wɔn mienu ka baree mu yɛɛ atuu, na Nana Nyankopɔn hyiraa sika-kɔkɔɔ no so maa mmoadoma no, na kwaeɛm’ hɔ bɛyɛɛ anigyie bea de bɛsi nnɛ yi.
Ɛnɛ, Ɔpɛnima da a ɛtɔ so nkron wɔ mfeɛ mpem-mienu ne aduonu (9/12/2020) yi mu, Ghanaman asane akyerɛ wiase nyinaa sɛ yɛn na yɛhim ka-bi-ma-me-nka-bi frankaa wɔ Abibirem ha. Yɛkɔɔ abatoɔ mu nnanu a atwam’ yi, ɛkaa to-ne-abrɔ na Ghana asomdwie adwiri agu sɛ yɛn mfɛfoɔ wɔ aman bi so a ɛnɛ adane amanfo no.
Osono Kokuroko ne Kyiniyɛ Akatamanso kɔɔ akansie, ɔman no mu kyɛɛ mienu sei etu.
Nyankopɔn adaworoma, wɔn a Ghana nkankɔ da wɔn akoma so, na wɔrehwehwɛ sɛ yɛbɛduru Bɔhyɛ Asaase noso dwoodwoo dee wɔnho gyee mu.
Ɔmanpanin a na ɔdi Osono Kookuroko amanyɔkuo no anim no na abatoɔ baanodani no ama ne nsa so sɛ wadi nkunim. Ankane Ɔmanpanin Mahama a ɔdi Kyiniyɛ Akatamanso amanyɔkuo no anim no koo ɔkopa. Ɛnnɛ na annkɔ yie amma no, nanso, ɛsane sɛ Ghanaman asomdwie ho hia no nti, ɔbɛto nsa akyea deɛ wɔde Ghana akofena ahyɛ ne nsa no – Nana Akuffo Addo. Na mfeɛ nnan reba bio, yɛbɛsane ahwehwɛ deɛ yɛde Ghana agyapadeɛ bɛhyɛ ne nsa.
Gokafoɔ ka sɛ: Ɔsaman se ɛnyɛ ɛnɛ nkoaa ne anadwo.
Ghana adi nkunim!
Ghana Ayekoo !
Nyankopɔn nkɔso nhyira Ghanaman, na ɔma yɛn asomdwie yi ntena hɔ daa-daa afe-bɔɔ.
Ɔtwerɛfoɔ no ne: Owura Kwasi Yeboah (Sir Lord)
Previous NPP Loyal Ladies Congratulates Nana Addo Dankwa Akufo Addo
Next Full Text: Jean Mensa’s declaration of 2020 presidential election results